MDC Yorongera Dhende Magavhuna Akadomwa naVaMugabe Zvine Mutauro
Gumiguru 11, 2010
Nhengo dzeMDC dziri mudare reseneti dzinoti dziri kuzoramba kutambira kupinda mudare iri neChipiri kwemagavhuna ematunhu sezvo akadomwa nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vasina kusuma mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, sezvinodiwa nechibvumirano cheGlobal Political Agreement.
NeChina svondo rapera, VaTsvangirai akati VaMugabe vari kuenderera mberi vachityora mutemo nekudoma magavhuna, vatongi nevamwe vakuru vakuru muhurumende vasina kugara pasi nevamwe vavo muhurumende yemubatanidzwa.
VaTsvangirai, avo vange vachitarisirwawo kuenda neChipiri kunotaura nevatsigiri vavo kwaMutare nezve humbimbindoga muhurumende yemubatanidzwa huri kuitwa naVaMugabe, vambomisa nyaya iyi nekuda kwekushaya kwenhengo yebato ravo, Amai Connie Taruvinga.
Mufi ndiye munhu weChishanu kushaya mushure metsaona yakaitika mwedzi wapera vachibva kumhemberero yekuumbwa kweMDC dzakaitirwa kuGokwe.
Nekuda kwerufu urwu, mutauriri webato iri, VaNelson Chamisa, vanoti hurongwa hwaVaTsvangirai hwave kuitwa svondo rinouya.
Kubva zvatanga VaTsvangirai kuridza huwi kuti muhurumende yemubatanidzwa maberekera ingwe nemabasa aVaMugabe ekungodoma vanhu vasina kuvasuma, vaviri ava havasati vagara pasi kuti vataurirane.
VaMugabe vakasimuka neMugovera vakananga kumusangano weAfro-Asia kuLibya.
Seneta Obert Gutu veMDC vanoti vachakumbira mukuru wedare reseneti kuti riburitse magavhuna aya sezvo asina kudomwa zviri pamutemo. VaGutu vanoti kana mukuru wedare reseneti akasaburitsa magavhuna aya, vachaita ruzha mudare iri rwisati rwamboonekwa.
Hurukuro naVaObert Guti